AKHRISO: Muhiimada Khudbada C/raxmaan C/shakuur ka jeediyay Muqdisho & Xiisada Mooshinka yaala | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO: Muhiimada Khudbada C/raxmaan C/shakuur ka jeediyay Muqdisho & Xiisada Mooshinka yaala
AKHRISO: Muhiimada Khudbada C/raxmaan C/shakuur ka jeediyay Muqdisho & Xiisada Mooshinka yaala
Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur ayaa u mahad celiyay Xildhibaada, Masuuliyiinta iyo Shacabka soo dhaweeyay, wuxuuna sheegay in dalka uu kusoo laabtay iyadoo Madaxweyne Farmaajo uu eedeysan wuxuuna u jeediyay in isaga iyo Xildhibaanada ay Sharciga ku kala baxaan.
Siyaasiga Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo Maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa Khudbad xasaasi ah Goordhow ka jeediyay Garoon lagu ciyaaro Kubada Cagta oo Banaanbax soo dhaweyn ah loogu sameeyay.
“Waxaan u mahad celinayaa Xildhibaanada iyo Madaxda Xisbiyada Qoraxda maanta dhan joogay ee ila iyo hada nala socda, Muqdisho ayaa kusoo noqday iyadoo Madaxweynaha eedeysan yahay, adigaa isoo weeraray askartii iga laayay Maxkamad ayaan isla tagnay sharci ayaa ku kala baxnay adiga iyo Xildhibaanada sharci ku kala baxa”.ayuu yiri Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur.
Sidoo kale Siyaasiga ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ay tahay ay Dowlada xirato waddooyinka isagoo Shacabka ugu baaqay isku soo baxaan oo ay taageeraan Mooshinka Farmaajo.
“Reer Muqdisho hadaan nahay waxaan leenahay sow iyaga ma yiraahdaan waa markii ugu horeysay anagana waxaan leenahay waa markii ugu dambeysay oo jidadka nalaga xiryo waa markii ugu dambeysay oo canshuur xoog ah nagala qaado wa markii ugu dambeysay oo qori nalagu taliyo”.
Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur ayaa soo dhaweeyay Mooshinka Xildhibaanada Golaha Shacabka ka keeneen Madaxweyne Farmaajo isagoo ku eedeeyay inuu xumeeyay Xiriirkii Soomaaliya kala dhaxeeyay jabuuti, sidoo kale uu Somaliland codsaday Beesha Caalamka inay ka jarato Deeqaha la siiyo.
“Taankiga AMISOM la iskuma caburin karo kii itoobiyaayaa la isku caburin waayay, Walaalaheey Jabuuti ayaa ku door bgiday inuu ladagaalamo uu takooro wuxuu leeyahay Somaliland Deeqaha halaga jaro, waantaaageernahay mooshinka ay soo jeediyeen Xildhibaanada isla xisaabtan dhab ahayaa maanta wixii ka dambeeya bilaabanaya”.
Qeybaha kale ee Khudbada Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur, Muuqaalada iyo Sawirada sida loo soo dhaweeyay Goordhow kala soco Warqaad